स्वस्थ कसरी खान, वजन र हरेक दिन विस्मयकारी महसुस – Health Deo
स्वस्थ कसरी खान, वजन र हरेक दिन विस्मयकारी महसुस
म मेरो आहार सल्लाह मा एक लेबल राख्न रुचि छैन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धान, छैन नैतिकता, धर्म वा एक स्वस्थ आहार जस्तै हुनुपर्छ के को एक preconceived धारणा मा आधारित छ।
तर तपाईं यो लेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो एक “न्यून-Carb, रियल-खाद्य” आधारित आहार (LCRF) कल।
“कम-Carb, रियल-खाद्य” के मतलब?
मलाई शब्दावली एक बिट व्याख्या गरेर सुरु गरौँ।
एक कम कार्बोहाइड्रेट आहार प्रोटिन र स्वस्थ बोसो मा धनी खाद्य पदार्थ तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन, शर्करा र starches minimizes।
“रियल खाना” मानिसहरूलाई भर विकास पहुँच थियो भनेर खाद्य पदार्थ छानेर हो। प्रशोधन, कृत्रिम रसायन संग अस्वाभाविक खाद्य पदार्थ बचा छन्।
LCRF एक “आहार।” छैन यो भोजन, Bulletproof वैज्ञानिक प्रमाण आधारित जीवनशैली परिवर्तन को एक तरिका हो।
यो कृषि र औद्योगिक क्रांतियों अघि, मानिसहरूले वर्ष हजारौं लागि खान विकसित गरेको खाद्य पदार्थ जोड कि खाने को एक तरिका हो।
आहार यस प्रकारको न्यून-बोसो आहार अझै पनि विश्वभरिका सिफारिश गरिएको भन्दा बढी राम्रो काम गर्न सिद्ध छ।
खान छैन के
तपाईं निम्न खाद्य पदार्थ सीमित गर्नुपर्छ।
चिनी: थपियो चीनी, लत fattening र मोटोपना, मधुमेह र हृदय रोग जस्तै रोगहरु को एक अग्रणी कारण हो (1, 2, 3, 4, 5, 6)।
अनाज: तपाईं वजन, रोटी र पास्ता सहित गुमाउन चाहिएमा वेवास्ता अनाज। लस अनाज (गहुँ, spelled, जौ र राई) खराब (7, 8, 9, 10, 11) छन्। तपाईं वजन गर्न आवश्यक छैन भने चामल र जई जस्तै स्वस्थ अनाज ठीक हो।
बीउ र तरकारी तेल : भटमास तेल, मकै तेल र केही अरूलाई। यी ओमेगा-6 फैटी एसिड को एक उच्च राशि, अधिक हानिकारक हो जो (12, 13, 14) संग बोसो प्रक्रिया।
ट्रान्स बोसो: स्वास्थ्य को लागि अत्यन्तै खराब हो कि रासायनिक परिमार्जन बोसो। केही प्रक्रिया खाद्य पदार्थ (15, 16, 17) मा पाइन्छ।
कृत्रिम मिठास: क्यालोरी मुक्त हुनुको बावजुद अवलोकनीय अध्ययन मोटोपना र सम्बन्धित रोगहरु (18, 19, 20) सँग सम्बन्ध देखाउँछ। तपाईं मिठास प्रयोग गर्नुपर्छ भने, Stevia चयन गर्नुहोस्।
“आहार” र “कम बोसो” उत्पादनहरू: यी “स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ” को सबैभन्दा सबै स्वस्थ छैनन्। तिनीहरूले अत्यधिक प्रक्रिया र चिनी वा कृत्रिम मिठास संग लोड गर्न गर्छन। Agave सिरप जस्तै चिनी खराब छ।
अत्यधिक प्रक्रिया खाद्य पदार्थ: अत्यधिक प्रक्रिया कि खाद्य पदार्थ सामान्यतया अस्वस्थ र अस्वाभाविक रसायन उच्च पोषक कम र छन्।
तपाईं संघटक सूची पढ्न पर्छ। के तपाईं “स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ” भनेर चीनी, गहुँ र अन्य हानिकारक सामाग्री समावेश गर्न सक्छ मात्रा मा छक्क छौँ।
खान स्वस्थ खाद्य पदार्थ
तपाईं मानिसहरूलाई आनुवंशिक खाने गर्न छाँटकाँट छन् प्राकृतिक, प्रसोधन नगरिएका खाद्य पदार्थ खान गर्नुपर्छ। अनुसन्धान यस्तो खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य (21, 22, 23, 24) को लागि ठूलो हो भनेर देखाउँछ।
अभ्यास र वजन गर्न आवश्यक छैन जो स्वस्थ मान्छे को लागि, त्यहाँ बिल्कुल आलु र मीठो आलु, वा जई र भात जस्तै स्वस्थ गैर-लस अनाज जस्तै tubers जोगिन कुनै सिद्ध कारण छ।
तपाईं वजन भएको हो वा चयापचय मुद्दाहरू (कम एचडीएल, उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रल, ट्राइग्लिसराइड्स, पेट बोसो, आदि) छन् भने तपाईं सबै उच्च-carb खाद्य पदार्थ (25, 26) प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ।
मासु: मासु, पाठो, पोर्क, चिकन, आदि मानिसहरूले वर्ष हजारौं लागि मासु खानु भएको छ। प्रसोधन नगरिएका मासु पशुहरू (घाँस-खुवाउनुभयो गाई देखि बीफ जस्तै) प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाए, विशेष गरी यदि तपाईं लागि राम्रो छ।
माछा: माछा ठूलो छ। धेरै स्वस्थ, पूरा र ओमेगा3फैटी एसिड र अन्य पोषक मा धनी। तपाईं माछा (प्राथमिकताको फैटी माछा जस्तै माछा) हरेक हप्ता खान गर्नुपर्छ।
अन्डा: अन्डा ग्रह मा सबै भन्दा पौष्टिक खाद्य पदार्थ हुन्। यो पहेंलो भाग सबैभन्दा पौष्टिक र स्वास्थ्यप्रद भाग हो। ओमेगा3अन्डा सर्वश्रेष्ठ हो।
तरकारी: मानव शरीर को लागि आवश्यक हो कि फाइबर र धेरै पोषक हुन्छन्। हरेक दिन तरकारी खान।
फल: वृद्धि विविधता, राम्रो स्वाद, फाइबर र भिटामिन सी तिनीहरू अझै पनि धेरै चिनी उच्च हुनुहुन्छ मा तयार गर्न सजिलो र धनी छन्, त्यसैले तपाईं वजन आवश्यक भएमा ठिक्क खान्छन्।
पागल र बीउ: बादाम, अखरोट, सूर्यमुखी बीउ, आदि रिच विभिन्न पोषक मा, तर क्यालोरी धेरै उच्च। तपाईं वजन आवश्यक भएमा ठिक्क खान्छन्।
आलु: जड तरकारी आलु र मीठो आलु जस्तै स्वस्थ छन्, तर तिनीहरू अझै पनि Carbs उच्च हुनुहुन्छ। तपाईं वजन आवश्यक भएमा ठिक्क खान्छन्।
उच्च-बोसो डेयरी: पनीर, क्रीम, घिउ, पूर्ण-बोसो दही, आदि रिच स्वस्थ बोसो र क्याल्सियम मा। घाँस-खुवाउनुभयो गाई देखि डेयरी स्वास्थ्य (27, 28, 29) को लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भिटामिन K2, मा धनी हुनेछ।
बोसो र तेल: तेल, घिउ, सुंगुरको बोसो, आदि उच्च गर्मी पैन frying जस्तै खाना पकाउने लागि संतृप्त बोसो चयन गर्नुहोस्, तिनीहरूले गर्मी मा थप स्थिर छन्।
कफी: कफी स्वस्थ र एंटीओक्सिडेंट धेरै धनी छ, तर कैफीन संवेदनशील छन् जो मानिसहरू यसलाई हुँदैन। किनभने यो आफ्नो निद्राबाट बिगार्न सक्छ कफी दिनमा लेट जोगिन।
चिया: चिया एंटीओक्सिडेंट मा, स्वस्थ धनी छ र कफी भन्दा धेरै कम कैफीन छ।
पानी: तपाईं दिन भर र विशेष गरी कसरत वरिपरि पानी पिउन गर्नुपर्छ। हुनत सारा टन पिउन कुनै कारण, तिर्खा आफ्नो आवश्यकता को एक राम्रो विश्वसनीय सूचक हो।
कृत्रिम मिठास बिना कार्रोप्नेटेड सोडा ठीक छ।
चिनी र कृत्रिम मिठास, फल को रस, दूध र बियर संग sodas जोगिन।
सरल नियम: क्यालोरी पिउन नगर्नुहोस्।
यी indulgences आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ समय समयमा।
गाढा चकलेट: 70% कोका वा बढी जैविक चकलेट छान्नुहोस्। गाढा चकलेट स्वस्थ बोसो र एंटीओक्सिडेंट मा धनी छ।
रक्सी: वोदका, व्हिस्की, आदि: सुक्खा मदिरा र पेय थपियो चीनी वा Carbs समावेश छैन भनेर छनौट
कति कार्ब्स प्रति दिन?
यो व्यक्तिहरूलाई बीच फरक हुन्छ।
धेरै मानिसहरू सर्वश्रेष्ठ धेरै सानो Carbs खाने महसुस (50 ग्राम अन्तर्गत) अरूलाई अझै पनि कम carb छ रूपमा धेरै 150 रूपमा ग्राम, खान गर्दा।
तपाईं एक दिशानिर्देश रूपमा यी संख्या प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
प्रति दिन 10-20 ग्राम: धेरै कम, कम carb तरकारी बाहेक कुनै पनि Carbs खान सक्दैन। उपयुक्त तपाईं वजन धेरै गुमाउन वा तपाईं मधुमेह र / वा चयापचय सिंड्रोम छ भने छ भने।
प्रति दिन 20-50 ग्राम: तपाईं छिटो वजन गर्न आवश्यक छ भने। तपाईं तरकारी एकदम बिट र प्रति दिन फल एक टुक्रा खान सक्छन्।
प्रति दिन 50-150 ग्राम: यदि तपाईं इष्टतम स्वास्थ्य प्राप्त र जीवन शैली-सम्बन्धित रोग को आफ्नो जोखिम कम गर्न चाहन्छु। त्यहाँ प्रति दिन धेरै फल र आलु र भात जस्तै स्वस्थ starches को पनि एक सानो बिट लागि कोठा छ।
तपाईं प्रति दिन 50 ग्राम तल कार्बोहाइड्रेट कम हुँदा, तपाईं कुनै पनि चीनी, रोटी, पास्ता, अनाज, आलु र प्रति दिन एक फल अधिकतम खान सक्दैन।
म केही दिनको लागि तपाईंको खाना सेवन लग गर्न Fitday मा निःशुल्क खाता सिर्जना गर्न सिफारिस गर्छौँ। यो खाने छन् Carbs को राशि को लागि एक महसूस प्राप्त गर्न ठूलो तरिका हो।
Diabetics लागि चेतावनी: आहार मा कार्ब्स पाचन पर्चा मा ग्लूकोज मा तल भङ्ग गर्दै छन्, त्यसपछि तिनीहरूले रक्त शर्करा रूपमा शरीर प्रविष्ट गर्नुहोस्। तपाईं कम Carbs खान भने, तपाईं कम इन्सुलिन र ग्लूकोज-lowering लागूपदार्थ आवश्यक हुनेछ।
एक निश्चित स्तर (हाइपोग्लाइसीमिया) तल आफ्नो रक्त शर्करा खस्छ भने यो धेरै खतरनाक हुन्छ। तपाईं मधुमेह छ भने, कार्बोहाइड्रेट सेवन कम गर्नु अघि आफ्नो डाक्टर संग परामर्श।
यो किन काम गर्छ?
मानिसहरूलाई वर्ष हजारौं लागि शिकारी-gatherers रूपमा विकसित।
हाम्रो आहार बारेमा 10,000 वर्षअघि कृषि क्रान्तिमा आमूल परिवर्तन भयो।
तर, यो परिवर्तन सानो हामी आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण संग पछिल्लो केही दशकहरूमा देखेको गर्नुभएको विशाल परिवर्तन तुलना गरिएको छ।
यो आज मानिसहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूले विकास भर मा thrived आहार देखि धेरै फरक छ कि एक आहार खाने छन् एकदम स्पष्ट छ।
त्यहाँ धेरै “आदिम” संसारभरि अझै पनि शिकारी-gatherers रूपमा बाँच्ने प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाने आबादी छन्। यी मान्छे, दुबला उत्कृष्ट स्वास्थ्य हो र लाखौं द्वारा पश्चिमी आबादी हत्या गरिएका रोगहरु को सबै भन्दा दुर्लभ वा अवस्थित (30, 31) छन्।
अध्ययन मानिसहरूले हाम्रो शिकारी-gatherer पुर्खाहरूको (पनि paleolithic आहार को रूप मा) उपलब्ध थिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खान जब तिनीहरूले वजन र स्वास्थ्य मा विशाल सुधार देख्न (21, 22, 23, 24) भनेर देखाउँछ।
यो हर्मोन इन्सुलिन
यो हर्मोन इन्सुलिन साथै रक्त देखि र कक्षहरू मा ग्लूकोज सार्दा यसको भूमिका लागि ज्ञात छ। यसको प्रभाव गर्न इन्सुलिन एक कमी, वा प्रतिरोध, मधुमेह हुन्छ।
तर इन्सुलिन पनि शरीर मा अन्य भूमिकाको छ। इन्सुलिन बोसो उत्पादन र तिनीहरूले बोक्नु कि बोसो टुक्रयाउनु रोक्न बोसो कक्षहरू बताउँछ। इन्सुलिन स्तर उच्च हुँदा, शरीर ऊर्जा प्रदान गर्न बोसो स्टोर मा डिप छैन छनोट।
एक पश्चिमी, उच्च-carb आहार मा, इन्सुलिन स्तर उच्च सबै समय, सुरक्षित बोसो कक्षहरू मा दूर बन्द बोसो राख्दै हुनुहुन्छ।
Carbs इन्सुलिन secretion को मुख्य चालक छन्। एक कम carb आहार lowers र शेष रक्त शर्करा र त्यसैले इन्सुलिन स्तर (32, 33, 34) lowers।
इन्सुलिन तल गएपछि, शरीर सजिलै बोसो कक्षहरू भण्डारण गरिएका क्यालोरी पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो केही दिन कार्ब्स (35, 36) को सट्टा बोसो जल भिज्न लाग्न सक्छ।
कम कार्बोहाइड्रेट आहार धेरै satiating छन्। भोक तल जान्छ र मान्छे स्वतः तिनीहरूले जो वजन (37) को कारण, बाल्न भन्दा कम क्यालोरी खान सुरु गर्नुहोस्।
एक कम carb आहार को मुख्य लाभ तपाईं पूर्णतामा सम्म खान र क्यालोरी गणना बिना वजन गर्न सक्ने छ। कम carb खान र क्यालोरी प्रतिबन्धित आहार को सबैभन्दा खराब पक्ष प्रभाव जोगिन: भोक।
एक कम carb आहार को स्वास्थ्य लाभ
यसलाई कम carb आहार तरिका स्वास्थ्य को लागि खराब हो कि, पनि स्वास्थ्य पेशेवरों बीच, एक साधारण गलतफहमीले छ। जो यस्तो दावी स्पष्ट बनाउन मानिसहरू अनुसन्धान जाँच गर्न पाऱ्यो छैन।
आफ्नो मुख्य तर्क तिनीहरूले कोलेस्ट्रल उठ्छ र हृदय रोग को कारण जो संतृप्त बोसो, उच्च हुनुहुन्छ किनभने कम carb आहार खराब हो भन्ने छ।
तर हाल अनुसन्धान त्यहाँ चिन्ता गर्न केही छ कि सुझाव। Saturated बोसो उठाउनु एचडीएल (असल) कोलेस्ट्रल र (38, 39, 40, 41) सौम्य छ जो ठूलो एलडीएल गर्न साना, बाक्लो एलडीएल (धेरै खराब) बाट “खराब” कोलेस्ट्रल परिवर्तन।
तथ्यलाई Saturated बोसो हृदय रोग पैदा गर्दैन छ। यो बस सिद्ध कहिल्यै भएको एक मिथक (42, 43, 44) छ।
कम carb आहार वास्तवमा जोखिम कारक मा थप वजन र थप सुधार एक कम बोसो आहार (45, 46) तुलना गर्न नेतृत्व।
शरीर बोसो: एक कम carb आहार, पूर्णतामा सम्म खाएको, सामान्यतया क्यालोरी प्रतिबन्धित (47, 48, 49) हो भनेर एक कम बोसो आहार भन्दा बढी बोसो हानि हुन्छ।
रक्त शर्करा: मधुमेह र चयापचय सिंड्रोम को hallmarks एक लामो अवधि भन्दा धेरै हानिकारक छ एक उच्च रक्त शर्करा छ। कम carb आहार कम रक्त शर्करा (50, 51, 52, 53, 54)।
रक्तचाप: रक्तचाप उच्च छ भने, यो एक कम carb आहार (55, 56, 57) मा तल जान tends।
उच्च ट्राइग्लिसराइड्स: यी कि रगत वरिपरि निरन्तर चलिरहनु र हृदय रोग लागि बलियो जोखिम कारक हो बोसो छन्। कम carb आहार कम ट्राइग्लिसराइड्स कम बोसो आहार (58, 59, 60) भन्दा धेरै बढी।
एचडीएल (असल) कोलेस्ट्रल: आम बोल, “राम्रो” कोलेस्ट्रल बढी तपाईंलाई हृदय रोग को तल्लो जोखिम छ हो। कम carb आहार एचडीएल कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम बोसो आहार (61, 62) भन्दा धेरै बढी उठाउन।
sdLDL (खराब) कोलेस्ट्रल: न्यून-carb आहार एलडीएल कोलेस्ट्रल ठूलो एलडीएल, सौम्य छ जो साना, बाक्लो एलडीएल (खराब) बाट परिवर्तन हुन (63, 64)।
सजिलो: न्यून-carb आहार लीन सजिलो छैन, जो यकीनन dieting (65, 37) को सबैभन्दा खराब पक्ष प्रभाव छ, क्यालोरी गणना र भोक हुन आवश्यक छ कारण शायद कम बोसो आहार भन्दा हुन देखिन्छन्।
अनुसन्धान को सुन मानक हो कि वैज्ञानिक अध्ययन – कथनहरू माथि बेतरतीब नियंत्रित परीक्षण साँचो हुन देखाइएको छ।
साधारण न्यून-Carb साइड सुरुमा प्रभाव
आहार मा Carbs प्रोटिन र बोसो प्रतिस्थापन गर्दा धेरै कुराहरू कुशलतापूर्वक इन्धन रूपमा बोसो प्रयोग गर्न शरीर लागि हुन आवश्यक छ।
त्यहाँ हर्मोन मा प्रमुख परिवर्तन हुनेछ र शरीर माथि इन्जाइमहरु को उत्पादन Carbs सट्टा मुख्यतया बोसो जल सुरु गर्न रैंप गर्न आवश्यक छ। यसले केही दिनको लागि पछिल्लो गर्न सक्छन् र पूर्ण मिलाइएको सप्ताह लाग्न सक्छ।
पहिलो केही दिनमा साधारण साइड इफेक्ट समावेश:
साइड इफेक्ट चिन्ता गर्न सामान्यतया नम्र र केही छन्। आफ्नो शरीर दशकसम्म Carbs ज्यादातर जल गरिएको छ, यो प्राथमिक इन्धन स्रोत रूपमा बोसो प्रयोग गर्न अनुकूल समय लाग्छ।
यो “कम carb फ्लू” भनिन्छ र 3-4 दिन भित्र भन्दा हुनुपर्छ।
एक कम carb आहार मा, यो पर्याप्त बोसो खान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बोसो आफ्नो शरीर लागि इन्धन को नयाँ स्रोत हो। तपाईं कम carb र कम बोसो खान भने, त्यसपछि तपाईं खराब महसुस र सारा कुरा त्याग्न जाँदै हुनुहुन्छ।
सजग हुन अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा इन्सुलिन को अन्तस्करणले सोडियम समात्नुहोस् बनाउँछ भन्ने छ। तपाईं कम Carbs खान गर्दा, अन्तस्करणले सोडियम जारी। यो कारण मान्छे पहिलो केही दिनमा धेरै ब्लोट र पानी वजन को छ।
सोडियम यस हानि लड्न तपाईं आफ्नो खाना थप नुन थप्न वा हरेक दिन शोरबा एक कप पिउन सक्नुहुन्छ। तातो पानी को एक कप मा भंग एक झोल घन सोडियम को2ग्राम समावेश गर्दछ।
धेरै मानिसहरू प्रारम्भिक मिलाइएको अवधिमा हुँदा तिनीहरूले कम carb आहार, मा अझ महसुस भन्छन्।
तपाईं राम्रो लाग्छ भने, थप बोसो र सोडियम थप्दा यसलाई हेरचाह गर्नुपर्छ।
खानाको योजना तपाईंको जीवन बचाउन सक्ने
यो प्रति दिन Carbs 50 भन्दा कम ग्राम आपूर्ति एक हप्ताको लागि एक नमूना भोजन योजना छ।
नास्ता: विभिन्न तरकारी, घिउ वा नरिवल तेल मा तला संग आमलेट।
खाजा: ब्लूबेरी संग घास-खुवाउनुभयो दही र बादाम को एक मुट्ठी।
खाने: Cheeseburger (कुनै रोटी), तरकारी र साल्सा सस संग सेवा गरे।
नास्ता: बेकन र अन्डा।
खाजा: बाँकी बर्गर र शाकाहारी अघि रात देखि।
खाने: मक्खन र तरकारी संग उसिनेर सालमन।
नास्ता: अन्डा र तरकारी, घिउ वा नरिवल तेल मा तला।
खाजा: केही तेल संग चिंराट सलाद।
खाने: तरकारी संग ग्रील्ड चिकन।
दिन4– बिहीबार:
खाजा: नरिवल दूध, जामुन, बादाम र प्रोटिन पाउडर संग चाटुकर।
खाने: स्टेक र शाकाहारी।
खाजा: केही तेल संग चिकन सलाद।
खाने: तरकारी संग सुँगुरको मासुको चोक्टा।
दिन6– शनिबार:
नास्ता: विभिन्न veggies संग आमलेट।
खाजा: जामुन, नरिवल गुच्छे र अखरोट को एक मुट्ठी संग घास-Fed दही।
खाने: तरकारी संग Meatballs।
दिन7– आइतवार:
खाजा: नरिवल दूध, भारी क्रीम, चकलेट फ्लेवर्ड प्रोटिन पाउडर र जामुन को एक बिट संग चाटुकर।
खाने: छेउमा केही कच्चा पालुङ्गो संग कुखुराको पखेटा ग्रील्ड।
आफ्नो आहार मा तरकारी को एक किसिम समावेश गर्न आफ्नो सबै भन्दा राम्रो के। तपाईं प्रति दिन Carbs को 50g तल रहन चाहनुहुन्छ भने त तपाईं सुरक्षित फल एक टुक्रा वा केही जामुन हरेक दिन सक्छ।
जैविक र घाँस-खुवाउनुभयो खाद्य पदार्थ गर्दै छन्, तर केवल तपाईंले तिनीहरूलाई सजिलै किन्न सक्छन् भने। बस सधैं आफ्नो मूल्य सीमा भित्र कम्तिमा प्रक्रिया विकल्प चयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
के Snacks बारे?
तपाईं प्रति दिन3भन्दा बढी भोजन खान हुँदैन भन्ने कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छ। तपाईं भोजन बीच भोक प्राप्त गर्छन् भने, यहाँ, स्वस्थ सजिलै पोर्टेबल हुन्छन् र राम्रो स्वाद भनेर नाश्ता लागि केही विचार गर्दै छन्।
फल एक टुक्रा
मेहनत उसिनेर अन्डा
पागल को एक मुट्ठी
केही चीज र मासु
Wéi Gesond iessen, Gewiicht ze verléierenaWuelbefanne All Day Awesome